‘पहिलो प्रयासमा राम्रो प्रतिकृया पाइरहेको छु ’
मकवानपुर/मकवानपुरको गढी गाउँ पालिका वडा नम्बर ६, आभञ्ज्याङ् निवासी प्रदिपराज सापकोटा रोजगारीका शिलशिलामा अहिले साउदी अरबमा छन् । नेपाली लोक सङ्गीतलाई असाध्यै माया गर्ने यि यूवा रोजगारीको शिलशिलमा देश बाहिर भएपनि नेपालको गाउँघर, भीरपाखा याद आइरहने बताउँछन् । गाउँघरका साथीसंगीको याद आइरहँदा उनी लोकगीत गुनगुनाउँन थाल्छन् । त्यसो त यसै...
जीवनमा धेरै पटक रोएकी छु : संचारकर्मी विष्ट
मकवानपुर गोगने स्थायी बसोबास भएकी रमा विष्ट मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत छिन् । सञ्चारक्षेत्रबारे जिज्ञासु उनी रेडियो निकासमा केही समयदेखि कार्यरत छिन् । समाचार वाचनका साथै प्राविधिक रुपमा अनुभव लिन थालेकी उनीसंग जीवनभोगाईबारे संक्षेपमा कुराकानी गरेका छौं । १. तपाईंको नाम रमा, नामको अर्थ ? – खासै थाहा छैन । तर...
बाईपासको लागि ५ करोड ,राप्ती तटबन्धनको लागी ५० लाख !
मकवानपुर/आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटमा हेटौंडाको वाईपास सडक निर्माणको लागी ५ करोड र राप्ती तटवन्धनको लागी ५० लाख रुपैंया छुट्याईने निर्णय गरेको छ । सभासद रामनारायण विडारीको रिफारीसमा वाईपास रोड निर्माण गर्नको लागी भौतिक योजना मन्त्री रमेश लेखकले चैत १८ गते बसेको बैठकमा सो कुरा निर्णय गरेको जनाइएको छ । नेपाल बसोबास संरक्षण...
हेटौंडामा मेयरको टिकट लिन पार्टीभित्र दौडधुप
मकवानपुर/स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकिएसंगै मकवानपुरमा दलहरु चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । विशेषगरी हेटौंडाको मेयर को बन्ला भन्ने चर्चाले अहिले बजार तातेको छ । चुनावको मिती निर्धारण भएसंगै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा मकवानपुरमा सक्रिय विभिन्न पार्टीका नेता उम्मेदवार बन्नका लागि लबिङ्...
थापा भन्छन् – मधेसीमोर्चासंग सहमती हुन्छ !
राप्रपाका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले संविधानका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएको मधेसीमोर्चा पनि चुनावमा सहभागी हुने दाबी गरेका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले हेटौडामा आइतबार गरेको सम्मान कार्यक्रममा थापाले भने,‘ मधेसीमोर्चालाई पनि सहमतीमा ल्याएर चुनाव गर्ने तयारीमा सरकार छ । ’ सरकारले घोषणा गरेको...
सञ्चारकर्मी प्रशान्त देव रहेनन्
मकवानपुर/ मकवानपुरका युवा सञ्चारकर्मी प्रशान्त देवको निधन भएको छ । दर्शनज्योति मासिक पत्रिकाका प्रकाशक देवको उपचारको क्रममा पूरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा निधन भएको हो । प्रेस चौतारी मकवानपुरका जिल्ला कार्य समिती सदस्य देव दमको रोगबाट पीडित थिए । देवको २५ वर्षिया श्रीमती र दुई वर्षिया छोरी छन् । उनको अन्तिम संस्कार शुक्रबार विहान १० बजे...
मकवानपुर एमालेले छान्यो स्थानीय संयोजक
मकवानपुर/नेकपा एमाले मकवानपुर जिल्ला कमिटिले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना अन्तरगत पार्टी संगठन निर्माण गरेको छ । एमालेको जिल्ला कमिटिको बैठकले मकवानपुरको सबै गाउँपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका तथा थाहा नगरपालिकामा संगठन कमिटि निर्माण गरेको हो । बैठकले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको संयोजकमा गोपाल श्रेष्ठ तथा सह संयोजकमा हरिबहादुर महतलाई...